धनकुटामा महिन्द्राको सोरुम
काठमाण्डौ । नेपालका लागि महिन्द्रा टु ह्वीलरको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रालिले बैशाख ६ गतेदेखि धनकुटामा आफ्नो पहिलो सोरुम ‘निशान इन्टरप्राइजेज’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । धनकुटा–७ स्थित जिरो प्वाइन्टमा खोलिएको सोरुममा महिन्द्राको सम्पूर्ण बाइक र स्कुटरहरु उपलब्ध हुनेछन् । नयाँ सोरुमले स्थानीय ग्राहकहरुलाई टु...
काठमाण्डौ । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले नेपाली नयाँ वर्ष २०७४ लाई लक्षित गरी नयाँ ग्राहक योजना ल्याएको छ। ‘विस काउन्ट’ नाम रहेको यो योजनामा यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले तुरुन्तै आठ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार पाउनेछन् ।...
यामाहाको टेस्ट राइड सकियो, लक्ष्मण दानीले जिते आइफोन सेभेन
काठमाण्डौ । यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले यामाहा स्कुटर टेस्ट राइड क्याम्पेनको विजेताको नाम घोषणा गरेको छ । टेकुस्थित यामाहा सोरुम डी एन्ड डी अटो लिंकमा टेस्ट राइड गरेका लक्ष्मण दानीले आइफोन ७ जितेका हुन् । हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘इभिनिङ सो एट ६’ गरिएको प्रत्यक्ष लकी...
अब १२.९ प्रतिशतमै जेसीबी मेसिन, बैंक भन्दा कम ब्याजदर
काठमाण्डौ । नेपालका लागि जेसीबी हेभी इक्विपमेन्ट तथा कन्स्ट्रक्सन मेसिनको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्सले जेसीबी मेसिन खरिदमा सरल फाइनान्स सुविधा ल्याएको छ । नयाँ योजनाअनुसार अब जेसीबी ब्रान्डका कुनै पनि मेसिनहरु न्युनतम १२ दशमलब ९ प्रतिशत ब्याजदरमा किन्न सकिनेछ । देश विकास र पूर्वाधार निर्माण जस्तो निकै महत्वपूर्ण...
सुजुकी एक्सचेञ्ज मेलामा विशेष अफर
काठमाण्डौ । सुजुकी मोटरको आधिकारिक बिक्रेता सीजी मोटोकर्पले तीनदिने सुजुकी एक्सचेञ्ज मेला २०७३ योजना ल्याएको छ । यो तीन दिने योजनामार्पmत ग्राहकलाई झञ्झटमुक्त कागजपत्र, सरल र कम किस्ताबन्दीको व्यवस्था, ८.९९ प्रतिशत न्यूून ब्याजदरमा फाइनान्स सुविधा साथसाथै पुनः बिक्री सुविधा, सरल एक्सचेञ्ज, एक्सचेञ्ज बोनस, निःशुल्क २ वर्ष...
बजाज डोमिनार–४०० नेपालमा, धूम मच्चाउने दाबी
काठमाण्डौ । बजाज मोटरसाइकलको एक मात्र आधिकारिक बितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले अल न्यू बजाज डोमिनर–४०० बाइक सार्वजनिक गरेको छ । स्पोर्टी र बहुप्रतिक्षित डोमिनार रु.४,६९,९०० मा किन्न सकिन्छ । नयाँ डोमिनार–४०० ले रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । यो मोटरसाइकलको प्रमुख पक्ष भनेको यसको इञ्जिन हो । यसमा आधुनिक...
महिन्द्रा गाडीहरुको बुकिङ अब अनलाइनबाटै
काठमाण्डौ । महिन्द्रा गाडी तथा ट्रयाक्टरहरुको नेपालका लागि एक मात्र आधिकारीक बितरक अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रा. लि.ले सेवाग्राहीहरुलाई थप सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप अब अनलाइन मार्फत गाडीहरुको बुकिङ्ग प्रक्रियाको थालनी गरेको छ । गाडी बुकिङ्ग गर्ने ग्राहकहरुले यस कम्पनीको वेबसाइट www.onlineagni.com मा गई उपलब्ध गाडीहरुको मोडल नं.,...
राजधानीका सडकमा ‘बुलेटदेवी’को लस्कर !
काठमाण्डौ । नेपालको व्यवसायिक तथा औद्योगिक घराना एमभी दुुगड ग्रुपको विवेक अटोमोबाईल्स प्रा.लि.ले १०७ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा बुधबार पाँचौै पर्वतीय खेलकुद महोसवअन्तरगत नेपाल अटोमोबाईल्स एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा वुुमन इम्पावरमेन्ट इन मोटरसाइक्लिङि कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । पछिल्लो समय देशमा अटोमोवाइल्स मोविलटी...
बजाजको रात्रिकालीन मोटरसाइकल सर्भिसको सुरुवात
काठमाण्डौ । बजाज कम्पनीका लागि नेपालको एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द्र एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले आफ्नो बजाज सर्भिस सेन्टर गुसिङ्गाल, कुपण्डोल, ललितपुरमार्फत बजाज मोटरसाइकल चलाउने सेवाग्राहीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै रात्रिकालीन मोटरसाइकल सर्भिस सेवाको सुरुवात गरेको छ । दिनभर अफिस, ब्यापार ब्यवसाय, सेवा आदिमा ब्यस्त भई...
नाडा अटो शो अब उपत्यका बाहिर पनि, पहिलोपटक पोखरामा
काठमाण्डौ । वर्षौदेखि काठमाण्डौमा मात्र हुँदै आएको नाडा अटो शो अब उपत्यकाबाहिर पहिलोपटक पोखरामा समेत हुने भएको छ । पश्चिमाञ्चल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशनको एक प्रतिनिधि मण्डलसँगको छलफलको क्रममा नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ लगायतले यस्तो सहमति गरेका हुन् । पश्चिमाञ्चल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशन...
राष्ट्रबैंकको नीतिबाट नाडा आगो, वृद्धिदरमै असर पुुग्ने चेतावनी
काठमाण्डौ । तरलता अभावको समस्या समाधानको नाममा नेपाल राष्ट्रबैंकले गरेको निजी सवारीको कुल मूूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने नीतिको अटो व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले यो निर्णय तत्काल नसच्याए देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने, रोजगारीको समस्या झनै विकराल बन्ने दाबी समेत गरेका छन् । नेपाल अटोमोबाइल्स...
लुब्रिकेन्ट्सका उत्कृष्ट डिलरलाई इण्डोनेशियाको भ्रमण
काठमाण्डौ । पूर्वाञ्चल ल्युब आयल (पीएलओ)बाट उत्पादित मेघा लुब्रिकेन्टसले आफ्ना उत्कृष्ट ७ डिलरलाई इन्डोनेशियाको बाली भ्रमणमा लगेको छ । मेघा लुब्रिकेन्टसका प्रबन्ध निर्देशक तथा नाडाका महासचिव कृष्णप्रसाद दुलाल नेतृत्वको टोलीले इन्डोनेशियाका विभिन्न उद्योगको अवलोकन गर्नेछ । पूर्वघोषणाअनुसार मेघाले देशभर उत्कृष्ट कारोबार...
काठमाण्डौ । महिन्द्रा गाडीहरुको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि इन्कर्पाेरेटेड प्रा. लि.ले चरिकोटमा गत फागुन ९ गते आफ्नो नयाँ शोरुम “कार्की मल्टिमिडिया कन्सर्न”को सुरुवात गरेको छ । एक विशेष समारोहका बीच सो शोरुमको नेपालका लागि महिन्द्रा, इन्डियाका तर्पmबाट कन्ट्री म्यानेजर आशिष जोशी तथा उद्योग वाणिज्य संघ, दोलखाका उपाध्यक्ष दिनेश...
काठमाण्डौ । साङयङ मोटर्स्का नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता आइएमएस मोटर्स प्रा.लि.ले नक्सालमा सुविधासम्पन्न, आधुनिक तथा स्टेट–अफ–आर्ट एक्स्क्लुजिभ शोरुमको उद्घाटन गरेलगत्तै आफ्ना डिलर नेटवर्क र स्टेट–अफ–आर्ट सेवालाई साङयङ ग्राहकहरुमाझ विस्तार गर्ने योजना अनुसार आफ्ना प्राविधिक तथा सर्भिस इञ्जिनियरहरुलाई तालिम दिन थालेको छ...
अन्तिम समयमा शिवम् सिमेन्टको सेयरमूल्यमा उछाल
ग्रामीण विकास लघुवित्तमा रहेको राष्ट्रबैंकको संस्थापक सेयर आजबाट लिलाममा, सस्तैमा उठाउने मौका